कोडीयम - घरको हेरचाह
कोडी ( क्रोटोनका लागि अर्को नाम) एक उष्णकटिबंधीय संयंत्र हो जुन सडकको परिस्थितिमा 3.5 मीटर को उचाई बढ्छ, जबकि इनडोर बिरुवाले अधिकतम एक मीटरको उचाई छ।
बिरुवाको भन्दा सट्टा र बढ्दो परिस्थितिको अवलोकन गर्न कडा परिश्रम छ। त्यसैले, यो शुरुवात शौकिया बगैचाको लागि धेरै फिट छैन।
यदि तपाईंको घर कोडेक द्वारा बाँचिएको छ भने, यसको फूलहरु प्राय: गर्मीमा हुन्छ। यद्यपि, यो घटना असीम छ।
कोडीयम: घरको हेरविचार
यसको लागि परिवेशको अधिकतम तापमान 25 डिग्री छ। यस अवस्थामा, अचानक तापमान परिवर्तनबाट जोगिन आवश्यक छ, अन्यथा रोप हुनेछ। तथापि, 20 डिग्री सम्म तापमानमा कमी रोपनीको विकासमा नकारात्मक प्रभाव छैन। कोडियम राम्रो सूर्यलाइट वा बिखरेको बत्तीमा राम्रो हुन्छ। तर कि पत्तिको जलावश नगर्ने, यो स्याउकोटको खुराक गर्न आवश्यक छ।
फूल को आर्द्रता को लागि धेरै मांग छ, यसैले पानी को बावजूद, तपाईंलाई पानी संग दैनिक दैनिक छिद्रण को आवश्यकता छ। प्यानमा पानी स्थिर नगर्नुहोस्। यो मिथक कोमबाट टाढा र सुखार्नु पर्छ।
एक पटक एक महिनामा, न्यानो बहाव उपयोगी छ।
बाँकी अवधिमा, जाडोमा, पानी र छिटो कम हुन्छ।
वर्ष भर, खनिज उर्वरकहरू पेश गरियो: प्रत्येक दुई हप्ता गर्मीको सिजनमा र एकपटक सर्दियामा एक महिना। साइयनाइडको लागि बीज मिश्रणले टर्फ मैदान, स्पग्नाम र रेतमा समावेश गर्दछ।
सही फारमको सुन्दर मुकुट बनाउन को लागी, कोडिङ आवधिक प्रिन्सिंग चाहिन्छ। जवान रोटी चुरोटमा बनाइन्छ जसरी यसको लम्बाइ 10-15 सेन्टिमिटर सम्म पुग्छ। त्यसपछि यो हरियो 20 सेन्टीमिटरसम्म चट्याउन आवश्यक पर्दछ।
इनडोर फूल कोडिंग: प्रत्यारोपण र प्रजनन
कोडिंग प्रत्यारोपण गर्नु अघि, मिट्टी तयार गर्न आवश्यक छ: यो पात, सोड, हिरोइन, रेत र पटको हुनुपर्छ। साथै कोइरालाको सानो टुक्राहरू थप गर्नुहोस्। बिरुवाको पानीको खाँचो छ।
एक प्रत्यारोपण वसन्तमा गरिन्छ। यो गर्न, अघिल्लो एक भन्दा ठूलो बर्तन लिनुहोस्। त्यसपछि पृथ्वीको तह
अर्को, बिरुवालाई क्षतिपूर्ति नगर्दा पृथ्वीको क्लोडको साथ पुरानो बर्तन बाट रोशन हटाउनुहोस्। त्यसपछि संयन्त्रलाई नयाँ बर्तनमा राख्नुहोस् र किनारामा जमीनमा पिन गर्न सुरु गर्नुहोस्। रोपणको सबै जड नयाँ पृथ्वीको परतमा बन्द भएपछि, तपाईंलाई कोडा आराम गर्न र नयाँ सब्सट्रेटमा अनुकूल गर्न आवश्यक छ। अनुकूलन पछि, बिरुवाको हेरचाह माथि वर्णन गरिएको जस्तो छ।
Cynomium को पुनरुत्थान कटन को द्वारा गरिन्छ। क्यूमियम गुणा गर्नु अघि, तपाईले ठूलो कर्टिङको साथ स्वस्थ बिरुवाहरू छनौट गर्न आवश्यक छ। वसंतको बीचमा, काटीहरू काटिएका छन् र पानी वा एक पृथ्वीमा घुम्न सक्दछ sphagnum र कोट। कट्टिङलाई उच्च आर्द्रता र कम्तिमा 25 डिग्रीको परिवेशको तापमान प्रदान गर्न आवश्यक छ। यो ग्रीनहाउसमा बढ्न उत्तम छ। घरमा, तपाईं कट्टरहरू एक प्लास्टिकको थलोसँग लुकाउन सक्नुहुन्छ। दुई महिना पछि, उड्ने भाँडाहरू अलग बर्तनहरूमा रोपिएका छन्, खनिज उर्वरकहरूसँग पकाएर र पानी पिउने। पछि हेरचाह एक वयस्क संयंत्र को लागि को रूप मा गरिन्छ।
किन पातहरू सूखे र कोडिङमा टाँस्छन्?
यदि बिरुवा गलत छ (पानीको साथ माथिल्लो पटक वा बाढीले भरिएको पानी) को छ भने, यसको निचो पातहरु पहेंलो घुमाउन सक्छ र पछि पतन हुन सक्छ।
एउटै घटना देख्न सकिन्छ यदि कोठा धेरै सुन्तला छ, धेरै उच्च परिवेशको तापमान वा, बरु, एक बलियो ठंड।
कोडीयोम: रोग र कीटहरू
एक अत्यधिक सूखी वातावरण मा, पुस्तिका को सुझावहरु को सुखाई जान सक्छ, र पाना स्वयं, जो मूल रूप देखि चिकनी थियो, नालीदार कागज जस्तै दिख रहेको छ। साथै, ओभरडाइ एयरले स्पाइडर माइटको उपस्थितिको लागि राम्रो अवस्था सिर्जना गर्दछ।
यदि रोपण अनावश्यक रूपमा पानीमा छ, कोडिंगको आधार घट्न सक्छ, र यसको पनीर फर्न सक्छ। यस अवस्थामा, तपाइँ यसलाई पानी रोक्न र यसलाई छिट्टै रोक्न, यो समय पुनर्स्थापित गर्न, कुन पछि फेरि तपाइँलाई पानी पुन: सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
पात ब्लेडहरू जलाउनदेखि जोगिन, तिनीहरूलाई सीधै प्रत्यक्ष सूर्यलाइटको तल स्प्रे नगर्नुहोस्।
यसको सही परिस्थितिको बावजुद, उचित हेरचाहको साथ कोडेममले धेरै वर्षको लागि असामान्य रंगहरुका पत्रपत्रहरूसँग खुसी पार्नका लागि सक्षम छ।
जब बिरुवामा काली मिर्च लगाउने?
टोकन - रोपण र हेरविचार
शरद ऋतुमा रास्पबेरी कसरी रोप्ने?
बिरुवाहरू - बढ्दै र ग्रीनहाउसमा हेरचाह, प्रक्रियाको सबै सबटिलेटहरू
सर्दमा ग्रीनहाउसमा बढ्दै कर्करहरूको डच प्रविधि
आलु "टिम" - किस्मको विवरण
Fundazol - अनुप्रयोग
घरमा एक विदेशी संयंत्र बढ्दैछ
स्याउको पेटीमा लडाइँ
स्याउ ब्लासो किन र फलफूल छैन?
बारबारिस टुङ्गबर्गको गोल्डेन रिंग
पैसाको रूख - कसरी प्रक्रिया रोपण गर्ने?
के म नाशपातीमा नाशपाती गर्न सक्छु?
ड्रेस कोड "ककटेल"
स्वीडेन सिल्भियाको रानीले सबैलाई कसरी थाहा पायो त्यो उनी आफ्नो पाटीलाई कसरी प्रेम गर्छन्
एस्किडी - उपचार
मासु रोल नुस्खा
ओलम्पिकको शैलीमा नयाँ वर्ष
पुरानो पुल अतिसार
मेडागास्कर कर्क्रोच - यसलाई कसरी घरमा राख्न सकिन्छ?
अजमेरको साथ सलाद - एक स्वादिष्ट र स्वस्थ व्यंजन पकाउने 10 मूल विचार
एक बहुमुखी मा समुद्री खाना संग रिस्टाटो
कालो कपडाको छेउमा कस्तो प्यान्टहोस
Miley साइरस बाट योग मा मास्टर क्लास
पेट स्लिमिंगको लागि मालिश
एम्मा वाटसन र फिल्मको युरोपियन प्रीमियर "दगिनिद कालोनी"
धेरै स्वादिष्ट सेब पाइप खट्टा क्रीम संग
किन रोटी ताजा रोटी?
एड वेस्टविकले बलात्कार गरेको आरोप लगाए
तरबूज देखि जाम - असामान्य व्यञ्जन को सबै भन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
इरेगा राम्रो र खराब
प्राण - क्यालोरी सामाग्री